Doorka Immunoglobulin G (Igg) wuxuu ka ciyaaraa Jirka Aadanaha?
Immunoglobulin (anti anti), waa glycoprotein molecule oo ay soo saareen unugyada dhiiga cad. Unugyada difaaca jirka ee 'Immunoglobulins' waxay ka ciyaaraan door muhiim ah ogaanshaha iyo isku xirnaanta nafleyda qaar sida bakteeriyada iyo fayraska. Unugyadaasi waxay kaloo gacan ka geystaan ​​burburinta antig-yadaas. Sidaas oo ay tahay, waxay sameeyaan qayb ka mid ah jawaabta lagama maarmaanka u ah difaaca.
Waxaa jira shan nooc oo waaweyn oo Immunoglobulin ah oo ku jira naasleyda kuleylka gala wareega, taas oo kuxiran kala-duwanaanta amino acid kala-baxa ah ee lagu muujiyey gobolka joogtada ah ee silsiladda culus ee jirka. Waxay ka kooban yihiin IgA, IgD, IgE, IgG iyo sidoo kale unugyada difaaca jirka ee IgM. Mid kasta oo ka mid ah noocyadan antibody-ga ayaa leh qaab dhismeedkoodu kaladuwan yahay, marka waa hawl u gaar ah iyo wax ka qabashada antigens-ka.
Unugyada jirka ee IgA waxay inta badan ku yaalliin meelaha jirka ee aadka u xasaasiga ah ee ay ku sugan yihiin walxaha shisheeye ee dibedda. Meelahaas waxaa ka mid ah sanka, habka hawada, marinka dheefshiidka, siilka, dhegaha, iyo sidoo kale dusha indhaha. candhuufta, ilmada, iyo dhiigga sidoo kale waxay wataan unugyada difaaca jirka ee IgA
Dhanka kale, unugyada unugyada jirka ee IgG ayaa ku jira dareeraha jirka. Unugyada IgM-ga waxaa si gaar ah looga dhex helay dhiiga iyo dheecaanka dheecaanka jirka.
Unugyada IgE-gu waxay ku yaalliin gudaha sanbabada, maqaarka, iyo waliba xuubka xuubka. Ugu dambeyntiina, unugyada difaaca jirka ee IgD ayaa laga helaa caloosha iyo unugyada xabadka.
Halkan, waxaan diiradda saari doonnaa IgG.
Waa maxay Immunoglobulin G (IgG)?
Immunoglobulin G (IgG) waa monomer; nooca ugu fudud ee antibody-ga ee aadanaha. Ka sokow, xisaabinta 75% ee dhammaan immunoglobulin jirka bini aadamka, waa nooca ugu badan ee immunoglobulin aadanaha.
Unugyada dhiiga cad waxay siidaayaan unugyada difaaca jirka ee IgG unugyada jawaab celinta difaaca jirka ee labaad si loola dagaallamo antigens-ka. Sababtoo ah ugu badnaantii jirka bini aadamka iyo aqoonsiga weyn ee antigen-ga, IgG wuxuu si weyn ugu faa iidaystay daraasadaha talaalada iyo sidoo kale baaritaanka cilmiga. Waxaa loo istcimaa sida dawooyinka ka hortagga caadiga ah ee labada aag.
Guud ahaan, IgG waa glycoproteins, mid kastaa wuxuu ka kooban yahay afar silsilado polypeptide leh laba nuqul oo isku mid ah oo ka mid ah labada nooc ee silsiladda polypeptide. Labada nooc ee silsiladda polypeptide waa iftiin (L) iyo culus, gamma (γ). Labada waxay ku xiran yihiin xarigyo burburin iyo sidoo kale xoogag aan qarsooneyn.
Farqiga u dhexeeya unugyada immunoglobulin G wuxuu ku yimaadaa marka loo eego taxanahooda amino acid. Si kastaba ha noqotee, gudaha unug kasta IgG molecule, labada silsilado ee L waa daneeyaan, isla kiiskii silsiladaha H.
Doorka ugu weyn ee unugyada IgG waa in la abuuro rabshado ka dhex dhaca nidaamyada firfircoonaanta jirka bini aadamka iyo antigen-ka.
Immisa galaas oo galaas ah ayaa leh Immunoglobulin G (IgG)?
Immunoglobulin G (IgG) wuxuu ka kooban yahay afar hoosaad oo galaasno ah kuwaas oo ku kala duwan marka loo eego tirade lambar daminta iyo sidoo kale dhererka gobolka xiisaha leh iyo dabacsanaanta. Muraayadaha hoosaadkan waxaa ka mid ah IgG 1, IgG 2, IgG 3 iyo IgG 4.
IgG1 xisaabaadku waa qiyaastii 60 illaa 65% guud ahaan IgG-ga guud. Si kale haddii loo dhigo, waa go'doominta ugu caamsan ee seyumka aadanaha. Muhiimad ahaan, fasalkan immunoglobulin wuxuu hodan ku yahay unugyada ka hortaga ee ka caawiya la dagaalanka borotiinka waxyeelada leh iyo antibiyootigyada polypeptide. Tusaale borotiinada IgG 1 looga hortago waa sunta gawracatada, sunta bakteeriyada loo yaqaan 'tetanus bacteria' iyo borotiinka faayras.
Dhalaanka hadda dhashay waxay leeyihiin heer lagu cabiro karo oo ah tallaalka difaaca IgG1. Waa inta lagu jiro marxaladda dhallaanka in jawaabta ay gaarto feejignaanteeda caadiga ah. Haddii kale, ku guuldaraysiga in la gaaro feejignaanta marxaladdaas ayaa calaamad u ah in cunugga uu ku dhici karo cudurka 'hypogammaglobulinemia,' cilad-difaac oo ku dhacda heerar aan ku filneyn dhammaan noocyada gamma globulin.
immunoglobulin g subclass 2 wuxuu ku soo socdaa labaad marka loo eego waxyaabaha 'gooni-goosadnimada' ugu badan ee ka dhaca bini-aadamka. Waxay ku dhacdaa qiyaastii 20 illaa 25% Immunoglobulin G. Doorka immunoglobulin g subclass 2 waa in laga caawiyo nidaamka difaaca jirka inuu ka hortago antigens-ka polysaccharide sida Hardptococcus pneumoniae or Haemophilus influenzae.
Cunuggu wuxuu ku guuleystaa isku-darka caadiga ah ee 'Qaangaarka' ee subclass 2 immunoglobulin g marka uu gaaro lix ama toddobo sano jir. Yaraanta IgG2 waxaa lagu gartaa infekshannada habdhiska neef-mareenka oo badanaa ku baahsan dhallaanka.
Sidoo kale, IgG 1, Immunoglobulin G isotopes oo ay iska leeyihiin walxaha loo yaqaan 'Subclass IgG3' ayaa hodan ku ah unugyada jirka. Unugyadaasi waxay ka caawiyaan jawaab celinta jirka sidii looga gudbi lahaa borotiinka waxyeelada leh iyo antibiyootigga polypeptide ee jirka bini aadamka.
5% ilaa 10% wadarta guud ee jirka jirka jirka IgG waa nooca IgG3. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo ay ka tiro yar yihiin marka la barbar dhigo IgG1, mararka qaar IgG3 waxay leeyihiin xiriir aad u sarreeya.
Boqolkiiba IgG 4 ee wadarta guud ee IgG caadi ahaan waxay ka hooseysaa 4%. Waxaa sidoo kale xusid mudan in galaaskan 'Immunoglobulin G' laga heli karo heerar aad u hooseeya oo ka dhexeeya carruurta da'doodu ka yar tahay 10 sano. Sidaa daraadeed, ogaanshaha cudurka immunoglobulin g subclass 4 ayaa keliya u suurta gasho carruurta ugu yaraan toban sano iyo dadka waaweyn .
Si kastaba ha noqotee, saynisyahano weli ma aysan awoodin inay aqoonsadaan shaqada saxda ah ee immunoglobulin g subclass 4. Bilowgii, saynisyahannadu waxay ku xireen yaraanta IgG4 iyo xasaasiyadda cuntada.
Si kastaba ha noqotee, daraasad dhowaan la sameeyay ayaa muujisay in bukaanada qaba cudurka scoorosing ee loo yaqaan 'sclerosing pancreatitis, pneumonia' ama 'cholangitis' ay lahaayeen heerar sare oo IgG4 serum. Sidaa darteed, natiijooyinka cilmi-baarista ayaa jahwareer ka keenay doorka saxda ah ee immunoglobulin g subclass 4.
Immunoglobulins la wadaagaya isla subclass-ka waxay leeyihiin ku dhawaad ​​90% isku ekaansho iswada, iyadoo aan tixgelinaynin gobolada ay is bedbedalayaan. Dhanka kale, kuwa ka mid ah galaasadaha kaladuwan waxay wadaagaan keliya 60% la mid ah. Laakiin guud ahaan, heerarka uruurinta dhammaan afarta galaas ee IgG-ga ayaa isbedelaya iyadoo da 'ah.
Immunoglobulin G (Igg) Hawlaha iyo Faa'iidooyinka
Unugyada jirka ee IgG waxay door muhiim ah ka ciyaaraan waxqabadka tallaalka ee labaad maadaama IgM antibody uu daryeelo jawaabta koowaad. Gaar ahaan, immunoglobulin g antibody wuxuu hayaa caabuqyada iyo sunta jirkaaga isagoo ku xiraya cudurada sida fayraska, bakteeriyada iyo fangaska.
In kasta oo ay tahay ka hortagga ugu yar, haddana waa tan ugu badan ee jidhka naasaha, oo ay ka mid tahay kan aadanaha. Waxay ku dhacdaa ilaa 80% dhammaan unugyada jirka ee jirka ku jira.
Qaab dhismeedkeeda fudfudud, IgG wuxuu awoodaa inuu galo mandheerta aadanaha. Xaqiiqdii, ma jiro nooc kale oo Ig ah oo sameyn kara tan, iyagoo uga mahadcelinaya qaab dhismeedkooda adag. Sidaasoo kale, waxay door muhiim ah ka ciyaartaa ilaalinta dhallaanka cusub bilaha bilowga ee rimidda. Tani waa mid ka mid ah faa iidooyinka immunoglobulin g ee muhiimka ah.
Moleekulada 'IgG' waxay ka falceliyaan dadka ka shaqeeya Fcγ ee ku jira xanjada, unugyada dilaaga unugyada dilaaga ah ee dabiiciga ah, iyagoo ka dhigaya kuwo aan awood lahayn. Ka sokow, molecules-ku waxay awood u leeyihiin inay kiciyaan nidaamka dhameystirka.
Nidaamka dhameystirku waa qeyb ka mid ah nidaamka difaaca jirkiisa doorkiisuna waa sidii kor loogu qaadi lahaa awoodda antibody iyo unugyada phagocytic unugyada looga saari lahaa microbes iyo unugyada dhaawacmay jirka. Nidaamku wuxuu sidoo kale wanaajinayaa awooda unugyada difaaca jirka iyo unugyada si ay u burburiyaan xuubka unugyada ee cudurada kuna soo kiciya. Tani waa mid kale oo ka mid ah faa'iidooyinka immunoglobulin g.
Jirkaagu wuxuu soosaaraa difaac looga hortago cudurka si looga hortago cudurka. Jidhku wuxuu hayn karaa dawadan muddo dheer si ay uga caawiso kaliya la dagaalanka cudurada faafa ee sidoo kale wuxuu fududeeyaa ka saarida kuwa burburay nidaamkaaga.
Sababo la xiriira adkaysiga dhiiga ee sareeya, IgG ayaa ah unugyada difaaca jirka ee ugu waxtarka badan tallaalka dadban. Sidaas oo ay tahay, IgG inta badan waa astaan ​​muujineysa inaad qabtid jeermis ama tallaal dhowaan.
Isticmaalka IgG Powder Pillder iyo Codsiga
Budada IgG waa kaabis nafaqada la sifeeyay oo u adeegta isha hodanka ah ee immunoglobulin G (IgG). Waxay bixisaa waxqabadka ugu sarreeya ee IgG si looga caawiyo jirkaaga inuu yeesho jawaab celin difaac adag, gaar ahaan haddii aad qabtid arrimo badan oo la xiriira xasaasiyadda.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee IgG Powder waa dambarro loo yaqaan 'colostrum colostrum' kaas oo bixiya noocyo badan oo si dabiici ah u dhaca immunoglobulins. Immunoglobulins-kaani waxay gaar u yihiin unugyada difaaca jirka ee kaladuwan, oo ay ka mid yihiin Immunoglobulin G (IgG). Sidaa daraadeed, colostrum immunoglobulin g waa hab wax ku ool ah oo lagu xoojiyo difaaca jirka jirka si loola dagaallamo cudurada.
Iyada oo la adeegsanayo immunoglobulin g colostrum oo ah qaybteeda ugu weyn, IgG Powder wuxuu bixin karaa ugu badnaan 2,000 mg oo IgG ah halkii qaadasho. Budada waxay sidoo kale jirkaaga siin doontaa borotiin (4 g halkii qaadasho)
Gaar ahaan, immunoglobulin g colostrum-ka ee budada ayaa la tijaabiyay oo la caddeeyay inuu dadka ka caawin doono joogtaynta nidaamka difaaca ee xiidmaha. Waxay ku gaadhaa tan iyada oo lagu xidho tiro badan oo ah microbes iyo sunta ku jirta gut lumen.
Sidaa darteed, dheefaha immunoglobulin g waxaa ka mid ah:
Isbadal dhanka difaaca jirka ah
Caqabadda adag ee is-difaaca jirka (GI)
Dayactirka dheelitirka caabuqa caadiga ah
Taageerada caafimaadka dhallaanka ee dhallaanka
Kordhinta xasaanada jirka 'Mucosal', oo ay ugu wacan tahay saadinta 'Immunoglobulin' oo aan la tacaleynin oo kicisa xasaasiyadda
Dayactirka dheelitirka microbial
Isticmaalka lagu taliyay
Ma jiraan qiyaasta daawada IgG budada saxda ah ee saynis ahaan loo xaqiijiyey inay tahay tan ugu habboon. Si kastaba ha noqotee, khubarada caafimaadku waxay soo jeedinayaan in hal ama dhowr mootooyin oo budada ah maalin kasta ay fiican yihiin. Ku dar budada IgG 4 wiqiyadood oo biyo ah / cabitaanka aad ugu jeceshahay ama uu dhakhtarku kugula taliyo.
Yaraanta Immunoglobulin G (Igg)
An Yaraanta Immunoglobulin G (IgG) waxaa loola jeedaa xaalad caafimaad oo lagu garto wax-soo-saarka jirka ee Immunoglobulin G oo aan ku filneyn. Marka qofku haysto cillad yaraanta IgG, isaga / ayada waxay halis ugu jirta in cudurro ay ku qaadaan maxaa yeelay habka difaaca jirkoodu waa daciif.
Nasiib darrose, yaraanta immunoglobulin g waxay kuu saameyn kartaa mar uun noloshaada, da 'da' ahna lagama dhaafi karo xaaladdan.
Qofna ma uusan suurtagelin inuu caddeeyo sababta saxda ah ee yaraanta immunoglobulin g. Si kastaba ha noqotee, waxaa si weyn looga shakisan yahay inay tahay wax la xiriira hiddo-wadaha. Sidoo kale, khubarada caafimaadku waxay aaminsan yihiin inay jiraan dawooyin iyo xaalado caafimaad oo sababi kara yaraanta IgG.
Soo ogaanshaha yaraanta immunoglobulin g waxay ku bilaabataa iyadoo la qaado tijaabo dhiig si loo qiimeeyo heerarka immunoglobulin. Ka dib baaritaano kale oo adag oo ku lug leh cabbiraadda heerka antibody si loo qiimeeyo jawaabta jirka ee tallaalada qaaska ah ayaa lagu sameeyaa shaqsi looga shakisan yahay inuu qabo cudurka.
Astaamaha Yaraanshaha Immunoglobulin G
Qofka liito immunoglobulin g waxay u badan tahay inuu muujiyo astaamaha soo socda:
Caabuqyada neef-mareenka sida caabuqa sanka
Caabuqa nidaamka dheef-shiidka
Cudurrada keena cuncun xanuun
infekshan daran oo suurtagal ah oo dilaa ah (xaalado naadir ah in kastoo)
Xaaladaha qaarkood, cudurada kor ku xusan waxay faragalin ku sameyn karaan howlaha caadiga ah ee marin mareenka iyo sambabbada. Sidaas darteed, dhibbanayaashu waxay la kulmaan dhibaatooyin xagga neefsashada ah.
Qodobka kale ee ah in laga fiirsado cuduradaas oo ay sababaan yaraanta IgG waa in ay weerari karaan xitaa dadka laga tallaalay cudurka sambabka iyo ifilada.
Sidee loo daaweeyaa yaraanta IgG?
Daaweynta yaraanta 'IgG' waxay leedahay habab kala duwan, mid walbana waxay kuxirantahay darnaanta astaamaha iyo caabuqa. Haddii astaamuhu yihiin kuwo sahlan, oo macnaheedu yahay inay kaa horjoogsanayaan inaad ku sii wadatid howlahaaga / hawlahaaga caadiga ah, daaweynta degdegga ah ayaa ku filnaan karta.
Si kastaba ha noqotee, haddii infekshannada ay yihiin kuwa daran oo soo noqnoqda, daaweynta socota ayaa noqon karta xalka ugu fiican. Nidaamkan daaweynta muddada-dheer wuxuu ku lug yeelan karaa qaadasho maalinle ah oo antibiyootig ah si looga hortago caabuqa.
Xaaladaha daran, daaweynta immunoglobulin ayaa imaan karta.
Daaweyntu waxay ka caawisaa kor u qaadida nidaamka difaaca jirka, sidaas darteed waxay ka caawineysaa jirka inuu si wanaagsan ula dagaallamo cudurada. Waxay ku jirtaa irbado isku dhafan oo ka hortaga (immunoglobulins) ama xalka maqaarka bukaanka hoostiisa, muruqyada ama xididkiisa / keeda.
Adeegsiga budada IgG ayaa waliba arki kara qof ka soo kabanaya yaraanta IgG.
Saamaynta Dhinacyada 'Immunoglobulin G'
Kadib daaweynta talaalka immunoglobulin, jirkaagu wuxuu u muuqdaa inuu si xun ula falgalo immunoglobulin g.
Waxyeelooyinka ugu caansan ee immunoglobulin g waxaa ka mid ah:
Jirka oo daciifa
Xanuun goobta mudista
Dhibaatooyinka aan caadiga aheyn ee immunoglobulin g waxaa ka mid ah:
Markuu immunoglobulin igG aad u sarreeyo
Aad u sarreeya Igg heerarka waxaa lagu arki karaa systemic lupus erythematosus, atrophic portal vein, cirrhosis, hepatitis firfircoon firfircoon, arthritis, subacute bakteeriyada endocarditis, dhowr myeloma, non-Hodgkin lymphoma, cagaarshow, cirrhosis, iyo mononucleosis.
Heerka IgG aad u daran ee immunoglobulin ayaa sidoo kale lagu ogaan karaa IgG-, qaar ka mid ah caabuqyada fayraska (sida HIV iyo cytomegalovirus), cilladaha unugyada Plasma, IgG monoclonal gamma globulin cudur iyo cudurka beerka.
Markuu immunoglobulin igG aad u hooseeyo
immunoglobulin g hooseeya waxay qofka gelisaa halis sare oo ah inuu ku soo baxo cudurada soo noqnoqda. heerarka hoose ee immunoglobulin g waxaa lagu arki karaa yaraanta antibody, syndodeficiency syndrome, non-IgG many myeloma, cudurka silsiladda culus, cudurka silsiladda iftiinka ama syndrome nephrotic syndrome.
Heerarka aadka u hooseeya ee antibody-ka ayaa sidoo kale noqon kara ogeysiisyo noocyo gaar ah oo cudurka leukemia, dhaawacyo gubasho daran, canbaar xasaasiyad, cudurka kilyaha, sepsis, nafaqo-xumo, pemphigus, murqaha tonic iyo xaaladaha nafaqo-xumada.
Markuu immunoglobulin IgG yahay mid togan
Haddii immunoglobulin IgG waa mid togan ee loogu tala galay infekshinka cudurka sida Covid-19 ama dengue, waa calaamad muujinaysa in qofka baaritaanka ku jira uu ku dhicikarey feyraska la xiriira usbuucyadii la soo dhaafay. Sidoo kale, natiijada togan ee immunoglobulin waxay muujineysaa suurtagalnimada in qofku helay tallaal dhow si looga ilaaliyo fayraska.
Sidaa daraadeed, natiijada togan ee immunoglobulin waa calaamad muujinaysa halista kordhaysa ee qofka infekshin la xiriirta antigenka oo gacan ka geysta baaritaanka togan. Tani waa gaar ahaan haddii natiijada togan aysan ahayn natiijada tallaalka.
maxaad Is Immunoglobulin G (Igg) Hawlaha Nolosha?
Immunoglobulin G (IgG) ayaa lama huraan u ah nashaadaadyada nolosha maxaa yeelay waxay ka ciyaartaa doorka ugu muhiimsan ilaalinta dadka caafimaadkooda iyo awoodida inay ku sii wataan nashaadaaddooda nolosha marka loo barbar dhigo kuwa kale ee Immunoglobulins.
Waxa xusid mudan, unugyada jirka ee IgG ayaa ku jira dhammaan dareeraha jirka, dheh ilmada, kaadida, dhiigga, dheecaanka siilka iyo wixii la mid ah. Iyada oo la tixgalinayo tan, layaab malahan in ay yihiin unugyada difaaca jirka ee ugu caansan, iyaga oo ah 75% ilaa 80% tirada guud ee ka hortagga jirka ee bini aadamka.
Unugyada jirka waxay ka difaacaan jirka qeybaha jirka / jirka ee taabashada dareerahaan ka keena jeermiga iyo infakshanka fayraska. Markaa, iyada oo aan lahayn ama lahayn heerar ku filan oo IgG ah, waxa laga yaabaa inaadan ka qaybgalin si aad si wanaagsan uga qaybgasho howlahaaga nolol-maalmeedka sababta oo ah cudurrada soo noqnoqda.
Intaa waxaa sii dheer, IgG wuxuu muhiim u yahay taranka aadanaha. Ahaanshaha kan ugu yar ee dhammaan unugyada difaaca jirka isla markaana leh hannaan aad u fudud, waa dawada keliya ee ka hortagta mandheerta dumarka uurka leh. Sidaa darteed, waa ka hortagga keliya ee ka ilaalin kara ilmaha aan dhalan cudurada fayras iyo jeermiga. La'aanteed, carruur badan oo aan dhalan ayaa khatar ugu jira inay ku soo baxaan xaalado caafimaad oo kala duwan, qaarkoodna waxay noqon karaan kuwo nolosha halis geliya ama cimri dheeraada.
Is Waxaa jira Is dhexgal ka dhexeeya Immunoglobulin G Iyo Lactoferrin?
Labada immunoglobulin G iyo lactoferrin labaduba waa qaybaha dabiiciga ah ee muhiimka ah ee caano boodhka ah (laga soo bilaabo dadka iyo lo'da). Sida immunoglobulin G, daraasadaha ayaa muujinaya in lactoferrin sidoo kale ku lug leeyahay howlo ilaalin oo kaladuwan ee jirka bini aadamka.
Waxay ka caawineysaa jirka inuu la dagaallamo sheyga 'pathogenic microorganisms' sida bakteeriyada, fayriska, iyo sidoo kale caabuqyada fangas. Si kale haddii loo dhigo, waxay xoojisaa shaqada difaaca jirka ee bina aadamka. Marka, supplements lactoferrin ayaa dhameystiri kara budada immunoglobulin G ee shaqadan.
Si kastaba ha noqotee, lactoferrin waxay leedahay shaqo dheeri ah; xiritaanka birta iyo gaadiidka.
More Macluumaadka ku saabsan Immunoglobulins
Goorma si loo baaro immunoglobulins?
Waqtiga qaar, takhtarkaagu wuxuu kugula talin karaa inaad marto tijaabinta immunoglobulin, gaar ahaan asaga / ayada waxay ka shakisan tahay inaad aad u hooseyso ama aad u sarayso heerka immunoglobulin. Tijaabadu waxaa loogu talagalay in lagu aasaaso heerka (qaddarka) immunoglobulin jirkaaga ku jira.
Badanaa, a Imtixaanka immunoglobulin waxaa lagula talinayaa haddii aad:
Cudurrada soo noqnoqda, gaar ahaan sanka, sanbabbada, caloosha, ama caabuqyada xiidmaha
Joogto / shuban daran
ficil-celinta xasaasiyadda daran
Taariikhda isdifaacida qoyska
Dhakhtarkaaga ayaa waliba laga yaabaa inay caqli gal noqoto inuu kugula taliyo tijaabada immunoglobulin hadii aad xanuunsatay kadib safarkaaga.
Tijaabada unugyada dhiiga ee immunoglobulins waxaa loo isticmaalaa in lagu caawiyo ogaanshaha xaaladaha caafimaad ee kala duwan sida:
Bakteeriyada iyo infakshanka fayras
Yaraanta karti la'aanta: Kani waa xaalad lagu garto awoodda jirka oo hoos u dhacday si loola dagaallamo cudurrada iyo caabuqa
cilladaha 'autoimmune' sida rheumatoid arthritis iyo lupus
noocyada kansarka sida myeloma badan
Infekshannada dhallaanka cusub
Sidee baaritaanka loo sameeyaa?
Tijaabadani badanaa waxay ku lug leedahay cabiraya seddexda nooc ee ugu badan ee immunoglobulin; IgA, IgG, iyo IgM. Saddexda waa la wada cabbiraa si loo siiyo takhtarkaaga sawir ku saabsan waxtarka jawaabtaada iska-caabbinta.
Muunadda dhiiggaaga ayaa ah muunadda tijaabada. Sidaa daraadeed, farsamo yaqaan sheybaarka ayaa irbad gelin doona qaybta gacantaada si ay u gaadhaan mid ka mid xididada hoose. Kadib, farsamoyaqaanku wuxuu oggol yahay dhiiga inuu ku uruuro tuubbada ama fiyaalaha ku xiran cirbadda.
Bedel ahaan, dhakhtarku wuxuu dooran karaa inuu isticmaalo muunad ka mid ah dheecaannada dhiigbaxa (CSF) halkii laga isticmaali lahaa dhiigga baaritaanka. Si loo caddeeyo, dareeraha cerebrospinal waa dareeraha ku xeeran xudunta laf-dhabarta iyo maskaxda qofka. Farsama yaqaankaagu wuxuu adeegsan doonaa hanaan la yiraahdo lumbar puncture si dheecaan looga soo saaro laf-dhabartaaga.
Soo saaridda muunadda dareeraha waxay noqon kartaa mid xanuun badan. Si kastaba ha noqotee, khabiirada ku lug leh nidaamyada noocan ah ee suuxinta maxalliga ah si looga sameeyo goobta ay dhibaatadu saameysey ayaa u nugul xanuun. Marka, waxa ugu horreeya ee farsamada sheybaarkaagu sameyn doono waa in cirbadda lagu duro daawo suuxin dhabarkaaga si loo kabuubyo xanuunka oo dhan.
Kadib, khabiirka sheybaarka ayaa ku weydiin doona inaad dhinacaaga u seexatid miis ka dibna jilbahaaga u soo qaad dhanka baaritaankaaga. Bedel ahaan, waxaa lagaa codsan karaa inaad miiska fariisato. Markaad ku jirtid labada jago, farsamayaqaanku wuxuu awoodi doonaa inuu helo meesha labada lafdhabarta hoose ee dhabarka.
Waxa soo socda ayaa ah in farsama yaqaanku uu geli doono cirbad jilicsan badhtamaha sedaxaad iyo afaraad lumbar vertebrae. Kadib, tiro yar oo ka mid ah dheecaannada maskaxda ku jira ayaa ku ururin doona irbadda godan. Dhowr ilbidhiqsi kadib, farsamayaqaanku wuxuu soosaari doonaa irbadda iyadoo dheecaan laga soo qaaday gudaha.
Ugu dambeyntiina, muunadda dheecaanka waxaa lagu dhejin doonaa xirmada ogaanshaha ee immunoglobulin-ga si loogu tijaabiyo.
Immunoglobulin G (IgG) wuxuu ka mid yahay tallaalada kale ee muhiimka u ah jirka aadanaha. Kuwa kale waa IgA, IgD, IgE, iyo sidoo kale IgM. Si kastaba ha noqotee, afarta nooc ee immunoglobulins, IgG waa kan ugu yar laakiin ugu caansan uguna muhiimsan jirka. Waxay ku jirtaa dheecaan kasta oo jidhka ka mid ah si loogu taageero nidaamka difaaca jirka ee dagaalka ay kula jiraan cudurrada (bakteeriyada iyo fayraska).
Aad u hooseeya ama heerka immunoglobulin G aad ayuu ugu xun yahay caafimaadkaaga. Haddii ay dhacdo yaraanta immunoglobulin g, a IgG budada iibso iyo adeegsiga ayaa tallaabo u noqon kara soo kabashadaada.
Saadoun, S., Biyo, P., Bell, BA, Vincent, A., Verkman, AS, & Papadopoulos, MC (2010). Cirbadda ku-tallaalidda maskaxda ee neuromyelitis optica immunoglobulin G iyo dhameystirka aadanaha ayaa soo saarta nabarrada neuromyelitis optica ee jiirka. maskaxda, 133(2), 349-361.
Marignier, R., Nicolle, A., Watrin, C., Touret, M., Cavagna, S., Varrin-Doyer, M.,… & Giraudon, P. (2010). Oligodendrocytes waxaa ku dhaawacmay neuromyelitis optica immunoglobulin G iyadoo loo marayo dhaawaca astrocyte. maskaxda, 133(9), 2578-2591.
Berger, M., Murphy, E., Riley, P., & Bergman, GE (2010). Tayada nolosha oo la wanaajiyey, heerarka immunoglobulin G, iyo heerarka caabuqa ee bukaannada qaba cudurrada aasaasiga ah ee iska-difaacidda inta lagu guda jiro is-daweynta is-hoosaadka immunoglobulin G. Joornaalka caafimaadka koonfurta, 103(9), 856-863.
Radosevich, M., & Burnouf, T. (2010). Is-dhexgalka immunoglobulin G ee gudaha: isbeddelada hababka waxsoosaarka, xakamaynta tayada iyo hubinta tayada. Vox sanguinis, 98(1), 12-28.
Fehlings, MG, & Nguyen, DH (2010). Immunoglobulin G: waa daaweyn suurtagal ah oo lagu xakameynayo neuroinflammation ka dib dhaawaca laf-dhabarka. Joornaalka talaalka daaweynta, 30(1), 109-112.
Bereli, N., Şener, G., Altıntaş, EB, Yavuz, H., & Denizli, A. (2010). Poly (glycidyl methacrylate) koofiyadaha xirmooyinka dhalada ah ee loo yaqaan 'cryogels' oo loogu talagalay soo-saarid gaar ah oo u gaar ah albumin iyo immunoglobulin G. Qalabka Sayniska iyo Injineerinka: C, 30(2), 323-329.